Adeegga - SHANGHAI GUANBO MAKIINADDA QALABKA CO., LTD.
GBM waxay maamushaa si loo gaaro isku -halayn iyo hufnaan labadaba. Kooxdayadu waxay leedahay khibrad ka badan 20 sano mashaariicda dekedaha kala duwan. Waxaan leenahay waayo -aragnimo hodan ah iyo geedi -socod hal -abuurnimo oo degdeg ah si aan kuu soo gaarsiino sida ugu fiican (xalka).
GBM waxay rumeysan tahay in guushu ay la timaaddo macaamiisheenna, is-aaminto, abuurto badeecadaha heerka koowaad ah iyo bixinta adeegyo macmiil oo heer sare ah.
GBM waxay bixisaa jawaab degdeg ah iyo la -talin bilaash ah (sida ugu dhakhsaha badan) 30 daqiiqado. Taageero farsamo nooc kasta ah ayaa la heli karaa 24 saacadood gudahood.
Adeegyada wax soo saarka
GBM waxay siisaa qorshaha wax -soo -saarka oo faahfaahsan tixraaca macaamiisha. Warshadeenu waxay fulisaa qorshaha wax soo saarka waxayna bixisaa warbixino horumarineed.
Dhismaha alxanka leh waxaa lagu aqoonsaday heerka Yurub. Badeecadda ay xaqiijiyeen shahaadooyinka dhinac saddexaad sida CCS, ABS, NK, BV, LR, SGS iwm ka hor intaan la keenin.
Tilmaan-bixiyaha goobta: Waxaan leenahay koox u xil-saaran xirfad-yaqaan oo leh waayo-aragnimo hodan ah iyo fiisooyin dalal badan leh, oo ka caawin kara macaamiisha inay dhammaystiraan rakibidda waqtiga ugu gaaban.
GBM waxay ujeedadeedu tahay inay gaarsiiso heerarka ugu sarreeya ee taageerada macmiilka iyo adeegga iibka kadib adduunka oo dhan laga bilaabo kontaroolka tayada iyo u xil-qaadista dayactirka iyo dayactirka. Iyadoo taas maanka lagu hayo, waxaan soo saarnay koox taageero macmiil si ay u bixiyaan heerarka ugu sarreeya ee adeegyada goobta. Kooxdayadu waxay wici doonaan isticmaalaha inta lagu jiro xilliga dammaanadda (si joogto ah) si ay ula socdaan xaaladda shaqada, sidoo kale waxay gacan ka geysanayaan kor u qaadista wax -soo -saarkaaga iyo inay sare u qaadaan soo -noqoshadaada maalgelinta raasumaalka.
Sawirka waxaa qaaday: Injineerada GBM oo dibedda u socda si ay u dayactiraan qabsashada Bengalese.
candhuufta telescopic wiishka boom, Wiishka Dheelitirka, wiishka sagxadda, wiishka Haydarooliga, wiishka badda, wiish kalluumeysi, Dhammaan Alaabta